Chineke Ò Nwere Ike Ịgbaghara Anyị Mmehie Anyị? | Ajụjụ Baịbụl
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Anyị nwere ike imeli ihe dị Chineke mma
Baịbụl kwuru na mmadụ niile bụ ndị mmehie. Anyị si n’aka nwoke mbụ bụ́ Adam keta mmehie. Ọ bụ ya mere anyị ji eme ihe ọjọọ mgbe ụfọdụ. Ọ na-abụkwa anyị mee mmehie, e mechaa, anyị akwawa mmakwaara. Ma, Ọkpara Chineke bụ́ Jizọs Kraịst nwụrụ ma si otú ahụ kwụọ ụgwọ mmehie anyị. Ọ bụ àjà Jizọs ji ndụ ya chụọ mere Chineke ji na-agbaghara anyị mmehie anyị. Àjà ahụ Jizọs ji ndụ ya chụọ bụ onyinye si n’aka Chineke.—Gụọ Ndị Rom 3:23, 24.
Ụfọdụ emeela mmehie dị oké njọ, ha amaghịkwa ma Chineke ọ̀ ga-agbaghara ha. Ma, anyị nwere obi ụtọ na Baịbụl kwuru, sị: “Ọbara Jizọs bụ́ Ọkpara ya na-asachapụ anyị mmehie niile.” (1 Jọn 1:7) Jehova ga-agbaghadịrị anyị mmehie dị oké njọ anyị mere ma ọ bụrụ na anyị ejiri obi anyị niile chegharịa.—Gụọ Aịzaya 1:18.
Olee ihe ndị ọzọ anyị ga-eme ka Chineke gbaghara anyị mmehie anyị?
Ọ bụrụ na anyị chọro ka Jehova Chineke gbaghara anyị mmehie anyị, anyị kwesịrị ịmụ banyere ya. Ihe ọ pụtara bụ na anyị ga-aghọta otú o si eme ihe, ndụmọdụ ndị ọ na-enye anyị, na ihe ndị ọ chọrọ ka anyị na-eme. (Jọn 17:3) Jehova na-eji obiọma agbaghara ndị mere mmehie ma chegharịa ná mmehie ha.—Gụọ Ọrụ Ndịozi 3:19.
Anyị nwere ike imeli ihe dị Chineke mma. Jehova ghọtara na anyị ezughị okè. Ọ na-eme ebere, dịrịkwa obiọma. Ọ̀ bụ na nke a ekwesịghị ime ka ị gbalịa mata otú i nwere ike isi na-eme uche ya?—Gụọ Abụ Ọma 103:13, 14.
Anyị kwesịrị irubere Chineke isi, ma ọ bụghị naanị irubere ya isi ga-eme ka anyị na ya bụrụ enyi.